Blog - Mero Khabar Nepal
काठमाडौँ – नेपाली सिने बृतका चर्चित जोडि छवि ओझा र शिल्पा पोखरेल बिचको घरेलु झगडाले अहिले निकै महत्त्व पाई रहेको छ नेपाली मिडियामा। छवि ओझा संग बिहे गरेर संगै रहदै आएकी नायिका शिल्पाले एकाएक आफू पिडित भएको भन्दै प्रहरिमा उजुरी दिए पछि घटनाक्रम बाहिर छरप्रस्ट भएको हो। यो घटना पछि नायिका शिल्पा अहिले डिभोर्स को अन्तिम संघारमा रहेकी छिन। यसै बिषय लाई लिएर अहिले नेपालका चर्चित सेलिब्रेटी हरु आ आफ्नो धारणा बनाउने क्रम जारी छ। केही समय पहिले नायिका केकि अधिकारीले लामो स्टाटस लेखेर घटनाको बिषयमा आफ्नो अभिब्यक्ती दिएकी थिईन। त्यस्तै अन्य कलाकार पनि कोहि शिल्पाको पक्षमा बोलेका छन भने कोहि छविको पक्षमा उभिएका छन। हालै एक अन्तर्वार्तामा नायिका स्वस्तिमा खड्का पनि यो बिषयमा भावुक बनेकी छिन। पत्रकारले उठाएको प्रशङमा उनले यो दु:खद कुरा भएको बताएकी छिन। हालै सम्पन्न भएको सरकारी अवार्डमा नागिका स
वि.सं.२०७६ श्रावण ०१ गते बुधबार तदनुसार ई.सं. २०१९ जुलाई १७ तारिख मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आम्दानीमा कमी आउने छैन । आत्मविश्वासमा अभिबृद्धि हुनेछ । हाकिम, मातापिता वा कुनै ठूलाबडा व्यक्तिसँग सुसम्बन्ध कायम हुनेछ र कुनै लाभमूलक काममा सहयोग लिन सकिने छ । कामदार र कर्मचारीले प्रशंसा पाउने छन् । व्यवसायिक र सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ, तर चिन्तनमूलक काममा समय दिने फुर्सत पाउनु हुन्न । प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय निकाल्न नसक्नाले थोरै तर सम्हाल्न सकिने नमिठोपना आउने सङ्केत भने देखिन्छ । आफन्तहरूले मनले चाहेजस्तै सहयोग गर्नेछन् । रोजगारीको प्रयासमा रहेकाहरूका निमित्त कर्मसिद्धिको समय छ । कर्मप्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन् । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) भाग्यस्थानमा चन्द्रमा रहे पनि धेरै उमङ्ग र उत्साह देखाउनु राम्रो हुँदैन । मातापिता र अभिभावक वर
एजेन्सी । साउन महिना भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना हुने गरेको छ । यस महिनामा शिव भगवानलाई प्रसन्न पार्न सकिए मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ ।श्रावण महिनामा भगवान शिवको मन्दीर, नदी नालामा भक्तजनको उपस्थिति हुने गरेको छ । श्रावणलाई भगवान शिवसहित प्रकृतिको पूजाको रुपमा समेत लिने गरिएको छ ।यस महिना भगवान शिवको पूजामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । पार्वतीले पनि श्रावणमा शिवलाई प्रशन्न गरेर पति पाएकी थिइन् । यसकारण युवतीहरु आफूले चाहेको जस्तो वरका लागि सोमबारको ब्रत बस्ने गरेका छन् । यदी निर्जल ब्रत बस्न नसकेको खण्डमा फलाहार ब्रत राख्न सकिने छ । शिव पुराणको पाठ पारयण गर्दा लाभदायक हुन्छ । शिव पुराण पाठ पारयण गर्नाले मुक्तिपाइने धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । शिवजीको पूजामा वेलपत्र र तामाको नाग भगवान शिवलाई अर्पण गर्नुपर्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार यसले कालसर्प, सर्प योग तथा राहु केतु
काठमाडौँ : हिन्दुधर्ममा विश्वास गर्ने जो कोहीले आफ्नो घर बनाउँदा वास्तुशास्त्र अनुसार बनाएका हुन्छन् । कुन दिशामा कसरी बनाउने भन्ने कुरा अनुसार घर निर्माण गर्दा राम्रो हुने जनविश्वास रहेiकाले यसरी घर तथा आवास निर्माण गर्ने परम्परा रहेको छ ।त्यस्तै घरलाई कसरी सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि वास्तु शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई वास्तु शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार घरलाई सुखी समृद्धि बनाउने केही उपाय बारे बताउन गइरहेका छौँ । १. घरको मुलढोकामा ठूलो ऐना राख्नु राम्रो हुन्छ । यसरी घरको गेटमा राखिएको ऐनामा घरमा आउने जो कोहीको प्रतिबिम्ब ऐनामा आओस् । यसो गर्दा घरमा कोही नकारात्मक उर्जा लिएर छिरेका छन भने त्यसको उर्जा फर्केर जान्छ । २. घरको मुलद्धारमा आर्शीवाद मुद्राम भएका हनुमानवजीको मूर्ति वा तस्वीर राख्दा दक्षिणतिर रहेको मुल गेटको वास्तुदोष हटे